Apple patanty ny tady fanovana izay lasa mpanohana | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny fanavaozana lehibe voalohany an'ny watchOS, izay nanjary famantaranandro alina mampiseho ny ora anaovantsika ny fitaovana, maro ireo mpampiasa nanapa-kevitra ny hividy laharana afaka miampanga amin'ny fomba tsotra ary tsy atahorana hianjera amin'ny Apple Watch. Ny fiampangana ny Apple Watch tsy misy fanohanana dia asa tokony hataonao mahazatra, satria raha ny fitsipika, ny tariby dia mivezivezy mihoatra ny kesy ao am-bavan'ny raibentsika.
Ny patanty farany izay nosoratan'i Apple tao amin'ny United States Patent and Trademark Office dia vao navoaka ampahibemaso izay ahitantsika fehy, karazana Milanese ahafahantsika manao zavatra maro hafa noho ny fitafiana fotsiny ilay fitaovana amin'ny hato-tananay. Araka ny hitanao amin'ny sary izay mitarika ity lahatsoratra ity, ny iray amin'ireo fiasan'ity fehin-kibo ity dia ny mety ho tonga mpanohana, hahafahantsika mametraka azy eo ambony latabatra toy ny famantaranandro mahazatra, na dia tsy eo intsony aza be dia be no entin'izy ireo.
Ny iray amin'ireo fiovana hitantsika amin'ny sary etsy ambany dia ny fahafaha-manao manarona ny fitaovana iray manontolo mba hahafahantsika mitazona ny Apple Watch Ao am-paosintsika, azontsika atao ny manorona ny tadiny manodidina azy mba hahafahantsika miaro azy amin'ny fotoana rehetra, na dia sendra latsaka amin'ny tany aza izany.
Fampiasana iray hafa azo atao, araka ny patantin'ny Apple, dia ny fametrahana azy eo amin'ny efijery an'ny MacBook, izay ampiarahin'ny andriamby, saingy noho io dia tsy maintsy mividy ny tsiroaroa isika satria MacBooks dia vita amin'ny aliminioma, fitaovana tsy ferrous izay tsy anarahan'ny andriamby. Amin'izao fotoana izao dia io no tadiny tena mahasoa izay hovidiko.
Ahoana ny hevitrao momba ity fatorana mpanova ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia manome patanty ny tady fanovana izay lasa mijoro